Akora fanadiovana solamaso vita ao an-trano…
Tsy mahita tory… andramo ity
Akora ilaina Akondro tsy voavaofy 1 Rano iray vera Vovoka kanelina 1 manongo
Zaza tsy mety matory amin’ny maizina… izao atao
Ø Mba hanazava rehefa mitsangana mikarakara ny zaza amin’ny alina dia azo atao ao ambany fandriana ny jiro.
Manaingo hoho amin’izay fitaovana ananana
Malaza be sady be mpitia ny fanaingoana hoho amin’ny alalan’ny kisarisary atao eo aminy. Maro anefa no tsy mahafehy ny fanaovana izany ka misafidy ireo fikolo hoho mahazatra ihany. Azonao atao samirery ao an-trano kosa nefa ny fanaingoana hoho miavaka sy araka izay fitaovana anananao.
Manadio “biberon” amin’ny vaingan-tsira… izao atao
Isan’ny fitaovana tena mila madio tanteraka ny “biberon” noho izy asiana ny sakafon’ny zaza. Indrindray dia mety hisy ronono hiraikitra ao anatiny kanefa sarotra diovina izany. Ny vaingan-tsira dia sady manila ny bakteria no manila ireo loto miraikitra amin’ny “biberon”.
Volo mitera-menaka…andramo ity
Ny atao : Ø Afangaro ny vinaingitra 1 tasy sy rano 1 tasy. Ø Ahosotra amin’ny volo rehefa manakobana loha farany. Ø Averina isak’izay manasa loha mandra-pahazo vokatra mahafa-po.
Manimba ny maso tokoa ireny solomaso ireny, raha maloto. Mila tandremana tsara anefa ny fanasana azy mba tsy hikiky ny vera. Raha tsy manana ny akora manokana natao hanadiovana ny solomaso ary ianao dia andramo ity akora iray ity.
- Afangaro ao anaty tavoahangy misy « spray » ny alikaola 90° sy ny rano. Ny fatran’ny alikaola dia 2/3 amin’ny tavoahangy, ary 1/3 kosa ny rano.
- Ampiana ranon-tsavony fanasana lovia in-telo mitete izany avy eo.
- Ahontsana tsara ary atsifitra amin’ny solomaso.
- Fafana moramora amin’ilay lamba natokana hamafana solomaso na amin’ny lamba malefaka.
Fadiana kosa ny mamafa ny solomaso amin’ny mosoara taratasy satria mikiky ny vera izy ireny.
Raha efa misy kiaka kosa ny veran’ny solomasonao dia azo fafana amin’ny feta fiborosiana nify mba tsy hampihitatra azy sy hampazava indray ilay vera.